Robert Mugabe oo laga qaaday xilkii Madaxa Xisbiga talada haya ee ZANU-PF - Qotoqoto
Robert Mugabe oo laga qaaday xilkii Madaxa Xisbiga talada haya ee ZANU-PF
Xubnaha Xisbiga talada haya ZANU-PF ee dalka Zimbabwe ayaa xilkii ka qaaday Robert Mugabe oo muddo 40 sano ku dhow hoggaaminayay xisbigiisa, iyadoo tan ay soo afjareyso xukunkii dheeraa
Xubnaha Xisbiga ayaa isku raacay in Hoggaamiyaha Xisbiga uu yahay Madaxweyne kuxigeenka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, waxaana tani dhabar jab ku tahay Madaxweynaha da’da ah.
Qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan Zimbabwe ayaa ka dambeeyay markii Robert Mugabe uu xilka ka qaaday kuxigeenkiisa, waxaana taas ka soo horjeestay Taliyaha Ciidamada Milateriga, taasoo keentay in Milateriga la wareego talada dalka.
Sidoo kale Xisbiga ayaa xilka ka qaaday Xaaska Madaxweyne Mugabe Grace oo heysay hoggaamiyaha qeybta Haweenka ee Xisbiga ZANU-PF, isla markaana lagala noqday xubinimadii Xisbiga.
Chris Mutsvangwa oo ka tirsan Guddiga Dhexe ee ZANU-PF ayaa sheegay inuu sii dhamaanayo waqtigii wada xaajoodka ee madaxweyne Mugabe, isla markaana ay u wanaagsantahay inuu xilka ka dago inta ay goori goor tahay.
Waddo kale oo xilka looga qaadi karo madaxweyne Mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyo shaqo ka joojin.
Afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe, Innocen Gonese ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka banneyn Talaadada soo socota ay si dhaqso ah u billaabayaan hannaanka ay xilka uga qaadayaan.
Madaxweyne Mugabe ayaa talada dalka Zimbabwe qabtay sanadkii 1980, Ilaa iyo hadda waa madaxweynaha ugu muddada dheer ee Afrika.
Previous PostPrevious Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo iska difaacay eeddo loo soo jeediyey
Next PostNext Xildhibaanada Golaha shacabka oo lagu soo rogay Canshuur (Akhriso)